‘दीपेन्द्रलाई नसाले छुँदैनथ्यो’ | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
‘दीपेन्द्रलाई नसाले छुँदैनथ्यो’
Posted on मार्च 20, 2010 by nepalkuwait	१९ जेठ ०५८　। तत्कालीन युवराजाधिराज दीपेन्द्र आफैंले ल्यान्डक्रुजर हाँकेर सातदोबाटोस्थित खेलमैदानमा पुग्नुभयो　। म युवराजका साथ उहाँकै गाडीमा थिएँ　। युवराजलाई खेलकुद परिषद्का त्यसवेलाका सदस्यसचिव विनोदशंकर पालिखे र ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणालगायतका खेलपदाधिकारी र खेलाडीले स्वागत गरे　। युवराजले खेलमैदानमै केहीबेर स्क्वास खेल्नुभयो　। अपराह्न त्यस्तै चार बजेको हुँदो हो　। युवराज र म सँगै सोही गाडीमा नारायणहिटी दरबार फर्कियौँ　। त्रिभुवन सदनबाहिर पुगेपछि युवराजले मलाई बिदा दिनुभयो　। मैले त्यसवेला बिदा हुनैलाग्दा ‘सरकार, आज बडागुरुज्यूकहाँ निम्तो पनि छ, सरकार सवारी होइबक्सनुपर्छ’ भनेर साँझको कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको थिएँ　। युवराजले ‘ल, ल तिमी अहिले जाऊ’ भनेपछि म सोझै कार्यालयतर्फ गएँ र काम सकेर घर फर्किएँ　। घर पुगेर खाना खाइवरी टिभी हेरेर बसिरहँदा एक्कासि दरबारबाट फोन आयो　। त्यसवेला त्यस्तै नौ बजेको थियो　। फोनमा युवराज दीपेन्द्रका अंगरक्षक राजु कार्की थिए　। उनको स्वर निकै अत्तालिएको सुनियो　। ‘सर, सबै सरकारहरूलाई माथि छाउनी अस्पताल पुर्‍याइएको छ　। स्थिति गम्भीर छ, तपाईं तुरुन्तै आउनुपर्‍यो,’ एडिसी राजुले भने　। त्यसवेला मैले केही मेसो पाइनँ　। साढे नौ बजेतिर युवराजको निजी सचिवालयमा पुग्दा पनि यथार्थ जानकारी पाउन सकिनँ　। कसैले पनि केही बताएनन्　। अन्योलको बन्दी बनेर रातभरि दरबारभित्र कार्यालयमै बसियो　। भोलिपल्ट १० बजेतिर मात्र हामीले थाहा पायौँ, दरबारमा अकल्पनीय नरसंहार भएको रहेछ, जसले हाम्रा प्यारा राजारानी र उनको वंशै चुँडेर लगेछ　।
०२५ सालतिरको कुरा हो　। त्यसवेला भर्खर नारायणहिटी दरबारमा प्रमुख राजदरबार पदाधिकारीको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो　। त्यही कार्यालयमार्फत दरबारमा मेरो सेवा सुरु भएको हो　। मैले पछि दरबारको प्रमुख संवाद सचिवालयमा पाँच वर्ष काम गरेँ　। तत्कालीन प्रमुख संवादसचिव नरेन्द्रराज पाण्डे विदेशयात्रामा गएका वेला मैले नै उनको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ　। सोही क्रममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग नजिक हुने मौका पाएँ　। पछि मलाई युवराज दीपेन्द्रको निजी सचिवालयको प्रमुख बनाइयो　।
काम गर्ने दौरान मैले युवराज दीपेन्द्रलाई हामी कर्मचारीको अगाडि कहिल्यै कसैसँग रिसाएको वा क्रूद्ध भएको देखिनँ　। सबैसँग मित्रवत् व्यवहार थियो, उहाँको　। अहिले पनि म उहाँको ‘स्माइलिङ फेस’ सम्झन्छु　। त्यस्तो मानिसले आफ्ना बुबा, आमा र नातागोतालाई मार्ने हदको रौद्र रूप देखाउनुभयो होला भन्ने मलाई पटक्कै विश्वास छैन　। मैले जानेसम्म उहाँ बुबा, आमालाई निकै आदर गर्नुहुन्थ्यो　। आप\_mना गुरुहरूलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो　। पढाइ पूरा भएपछि पनि उहाँ बुढानीलकण्ठ स्कुलमा गइरहनुहुन्थ्यो　। स्कुलमा गएको वेला सोझै पि्रन्सिपल नारायण शर्मा बस्ने क्वाटरमै गएर गुरुहरूसँग गफ गरेर फर्किनुहुन्थ्यो　।
जब दरबार हत्याकाण्ड भयो र त्यसमा दीपेन्द्रको हात रहेको समाचार आयो, मैले बुढानीलकण्ठ स्कुलमा दीपेन्द्रलाई नेपाली पढाउने टिचर रामबाबु सुवेदीसँग सोधेँ, ‘सर के त्यत्रो हत्याकाण्ड तपाईंकै शिष्यबाट भएको हो त ?’ रामबाबुले भनेका थिए, ‘होइन, मलाई उनले त्यत्रो नरसंहार गराए भन्ने कुरामा एकरत्ति विश्वास छैन　।’
आमजनतासँग राजपरिवारका अन्य सदस्यहरू खासै घुलमिल गर्दैनथे　। तर, युवराज दीपेन्द्र मेरै आग्रहमा पनि धेरैपटक जनसम्पर्कका अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुभयो　। मध्यपुर थिमी महोत्सवका वेला दीपेन्द्रले पैदलै सात किलोमिटर क्षेत्रमा भ्रमण गर्नुभएको थियो　। ०५८ वैशाख २८ गते पर्यटन बोर्डमा आयोजित मध्यपुर थिमी प्रदर्शनी नै उहाँ सहभागी भएको अन्तिम औपचारिक कार्यक्रम थियो　। त्यहाँ खट जात्राको झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो　। युवराजले बडो श्रद्धाका साथ जुत्ता फुकालेर खटभित्रका देवताको दर्शन गर्नुभयो र दर्शनपछि फुड फेस्टिभलका हरेक स्टलमा गएर टिकिन चिउरा र पालाको रक्सी खानुभयो　। कीर्तिपुरमा आमजनतासँगै मिलेर उहाँ वृक्षरोपणमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो　।
भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको ‘भक्तपुर महोत्सव’मा पनि युवराज सहभागी हुनुभएको थियो　। त्यहाँ पनि थिमीमा झैं उहाँ करिब सात किलोमिटर पैदलै टोलटोलमा घुम्नुभयो　। महोत्सवमा राजसंस्थाविरोधी नेताका रूपमा चिनिएका नेमकिपाका नेता नारायणमान बिजुक्छे पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो　। मैले नै उहाँलाई युवराजाधिराजको पछि-पछि हिँडाएको थिएँ　। त्यहाँ युवराजको हाउभाउ देखेर भक्तपुरवासी मोहित भएका थिए　।
शरतसिंह भण्डारी खेलकुदमन्त्री भएको वेला नेपालमा साफ खेल आयोजना भयो　। त्यसवेला युवराजको सक्रियताको सबैतिर प्रशंसा भएको थियो　। आफैं करातेका आठौं डन दीपेन्द्र बिहान आठ बजेदेखि नै खेल आयोजनाको निरीक्षण गर्नुहुन्थ्यो　। राम्रो खेल खेल्नेलाई आश्वासन दिनुहुन्थ्यो र धाप मार्नुहुन्थ्यो　। खेलाडी चाहे विदेशी हुन् या स्वदेशी, हार्ने हुन् वा जित्ने, सबैलाई उहाँ हौसला प्रदान गर्नुहुन्थ्यो　। ‘ल है राम्रो गर’ भन्नुहुन्थ्यो　। हार्ने खेलाडीलाई उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘खेलमा हार-जित भइहाल्छ, डन्ट वरी ओके !’
एकपटक मैले युवराज दीपेन्द्रलाई आफ्नै घरमा अतिथि बनाएँ　। मेरा दुई छोरा र भान्जाको संयुक्त ब्रतबन्ध थियो　। युवराज सहजै मेरो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर कुलेश्वर आवास क्ष्ाेत्रमा रहेको मेरो घरमा आउनुभयो　। उहाँका साथमा अधिराजकुमार नीराजनसहित अन्य चारजना साथी पनि थिए　। ब्रतबन्धमा सहभागी भएका अन्य आगन्तुकले पनि युवराजसँग भेट गरे　। मैले युवराजलाई आफूले घरमै तयार पारेको स्पेसल मदिरा टक्र्याएँ　। सो गृहनिर्मित मदिरामा सुगन्धका लागि ल्वाङ, सुकमेलका साथै पानमसला पनि मिसाइएको थियो　। करिब एक-दुई गिलास पिउँदा नै मताइदिने सो मदिरा युवराजलाई कति मीठो लाग्यो भने थपेको थप्यै गर्नुभयो　।
चार बोतल रित्तियो　। तर, युवराज र उहाँसँग आएका मित्रहरूको प्यास मेटिएन　। अन्तिममा अरू एक बोतल थप्नुभयो　। आश्चर्यको कुरो त के भने त्यतिविधि मदिरा पिएर पनि र्फकने वेलामा युवराज बिल्कुल होसमा हुनुहुन्थ्यो　। उहाँ आफैंले गाडी हाँकेर फर्किनुभएको थियो　। त्यसक्रममा उहाँले कुनै अस्वाभाविक व्यवहार प्रदर्शन गरेको मलाई हेक्का छैन　। अब म कसरी विश्वास गरूँ, दीपेन्द्रले नसाको सुरमा भटटट… गोली चलाउनुभयो भनेर ?
उद्योगपति पियुषबहादुर अमात्यका भाइ हिरेन्द्रबहादुर अमात्यको घरमा गल्फ कोर्सका पदाधिकारीहरू भेला भएका थिए　। युवराज र म पनि त्यहाँ पुगेका थियौँ　। रमाइलो जमघट थियो त्यो　। खानपिनका साथ रोचक गफ चलिरहेको थियो　। कुरैकुरामा कसैले ‘संस्कृत भाषाको अस्तित्व लोप हुन लागेको, नेपालमा संस्कृत भाषा बोल्ने मानिस फेला पार्न मुस्किल हुने गरेको’ बताए　। त्यो कुराले युवराजलाई छोएछ क्यार　। तुरुन्तै प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो, ‘कसले भन्छ, संस्कृत भाषाको अस्तित्व लोप हुन लाग्यो भनेर ? मलाई त सबै कण्ठै आउँछ　।’ त्यसपछि त युवराजले धमाधम संस्कृतका विभिन्न श्लोकहरू उच्चारण गर्न थाल्नुभयो, त्यो पनि पण्डितले झैं भाका हाली-हाली　। विदेशमा पढेका युवराजले संस्कृतका श्लोक पाठ गरिरहँदा र त्यसको नेपालीमा अर्थसमेत लगाइरहँदा सबै दंग परेर उहाँलाई हेरिरहेका थिए　।
योचाहिँ त्यसवेलाको कुरा हो, जतिवेला दीपेन्द्र जोग्राफीमा विद्यावारिधिको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो　। भूगोल विभागका प्राध्यापकहरूसँग उहाँको उठबस भइरहन्थ्यो　। एक दिन युवराजले मलाई ‘एयरपोर्ट हिँड’ भन्नुभयो　। युवराजकै गाडी चढेर एयरपोर्ट गएँ　। एयरपोर्टमा केही विदेशी गुरुहरू पनि रहेछन्　। युवराजले हामी सबैलाई हेलिकोप्टरमा चढ्न संकेत गर्नुभयो　। हामी सबै चढ्यौँ　। चालकलाई साइडमा राखेर हेलिकोप्टर उहाँले नै उडाउन थाल्नुभयो　।
दीपेन्द्रले हेलिकोप्टर उडाएर सम्बन्धित इन्स्टिच्युटबाट चालकको लाइसेन्स नै लिनुभएको थियो　। त्यसैले हामीलाई कुनै भय थिएन　। कुनै अज्ञात हिमाली भूभागमा उहाँले हेलिकोप्टर ओराल्नुभयो　। त्यहाँ जताततै हिउँ नै हिउँ थियो　। भुइँमा टेक्दा घुँडाभन्दा माथिसम्म हिउँ रहेछ　। त्यही ठाउँमा क्याम्प खडा गर्न भन्नुभयो, युवराजले　। त्यहीँ खानपिन हुन थाल्यो　। हिउँका डल्ला हानाहान गरेर हामीले रमाइलो गर्‍यौँ करिब तीन घन्टासम्म　। पछि काठमाडौं फकर्ंदा पनि युवराजले नै हेलिकोप्टर चलाउनुभएको थियो　।
दरबार हत्याकाण्ड नेपाल र नेपालीका लागि एउटा त्रासदीपूर्ण, अकल्पनीय र कारुणिक ‘दुर्घटना’ थियो　। राजा, रानी, युवराज र सम्पूर्ण राजपरिवारका सदस्यको एकैपटक संहार भएको त्यो घटना हामी सबै नेपालीका लागि कहिल्यै निको नहुने घाउका रूपमा रहेको छ　। सो नरसंहारबारे अनुसन्धानदाताहरूले आगामी दिनमा पनि अनुसन्धान गर्लान् नै　। त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम राज्यको हो, अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको हो　। यहाँ म त्यसबारेमा केही भन्न गइरहेको छैन　। मेरो आग्रह के मात्र हो भने सो हत्याकाण्डलाई लिएर जसरी तत्कालीन युवराजाधिराज दीपेन्द्रलाई पूर्ण रूपमा खलनायक बनाउन खोजिएको छ, त्यसबाट सत्य-तथ्यलाई उजागर गर्ने होइन, छोप्ने काम भइरहेकोजस्तो देखियो भन्ने मलाई लाग्छ　। अनुसन्धानदाताहरूले अनुसन्धानपछिको निष्कर्ष र ठोस प्रमाणका आधारमा कसैलाई दोषी, हत्यारा वा अभियुक्त ठहर गर्नु स्वाभाविकै हुन सक्ला, तर कतिपयले हचुवाकै भरमा दरबार हत्याकाण्ड युवराज दीपेन्द्रले नै गराएको दाबी गरिरहेका छन्, जुन जनमानसले पत्याउन गाह्रो छ　।
हत्याकाण्डको म प्रत्यक्षदर्शी होइन　। त्यसबारेमा किटेरै म केही पनि भन्न सक्दिनँ　। तर, हालै मात्र हिमालयशमशेर जबराले आफ्नो एक पुस्तकमा ‘दरबार हत्याकाण्ड दीपेन्द्रबाटै भएको’ दाबी गर्नुभएको रहेछ　। आफूले आँखाले नदेखेको विषयमा त्यसरी लेख्नु ठीक होइन　। कि उहाँले मैले आपनै आँखाले देखे भन्नुपर्‍यो, होइन भने कुनै सूत्रको हवाला दिएर कसैलाई अभियुक्त किटान गर्नु हँुदैनथ्यो　। जहाँसम्म मेरो कुरा छ, युवराज दीपेन्द्रबाट त्यस्तो नरसंहार भएको भन्ने कुरामा मलाई कत्ति विश्वास छैन　। युवराज दीपेन्द्रको निजी सचिवालय, प्रमुखका नाताले मैले उहाँलाई नजिकबाट जसरी बुझेँ, कार्यालयको कामको सिलसिलामा उहाँसँग जति निकट रहेँ र त्यसक्रममा उहाँको स्वभावबारे जति कुरा देखेँ, सुनेँ, भोगेँ, त्यसका आधारमा भन्नुपर्दा उहाँबाट त्यत्रो नरसंहार भएको हो भन्ने कुरा म मान्दिनँ　।
Filed under: समचार « वाईसीएलले गर्भवती महिला कुटे फेरियो व्यवस्था, तर फेरिएनन् नेता »
Roshan Thapa, on मार्च 20, 2010 at 10:29 अपराह्न said:	आदरणीय सौजन्य जोशी शर, तपाईंको लेख र सोचाई को कदर सम्पुर्ण नेपालीहरुले गरेका छन् तर जसले त्यो नरसंहारको रचना रचेका छन् तिनिहरुले यसलाई कुनै न कुनै माध्यम इस्यु गरेर दबाउन खोजेका छन्। हेर्नुस् न त्यो नेपाली मिडीया को वेब-साइट मा भएको डिस्कोभरी च्यानल मार्फत पनि काल्पणिक नाटक सृजना गरेर त्यहि दिपेन्द्र सरकारलाई नै दोषी देखाउन खोजेका छन् जब कि त्यस् नाटकमा कोही पनि सक्कली अनुहारका छैनन्।